တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT CAT-1 အဆင့်သို့လျော့ကျသွားပြီ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT CAT-1 အဆင့်သို့လျော့ကျသွားပြီ
T2K ၏ update #022 တွင် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT သည် အဆင့်-၁ CAT-1 တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ လျော့ကျသွားကြောင်း ၊ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပြီး ရွေ့လျားနှုန်းလည်း ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်နီးလာလေ ကျလာလေဖြစ်လာပြီး တစ်နာရီလျှင် ၈ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားနေကြောင်း၊ warm ocean moisture & unstable air တို့ကြောင့် အဆင့် – ၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CAT-2 အဖြစ်သို့ ပြန်လည်ပြီး အားကောင်းလာနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ရွေ့လျားနှုန်းကျဆင်းလာခြင်းကြောင့် မူလခန့်မှန်းထားသည်များထက်နောက်ကျကာ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ၇ နာရီနှင့် ၈ နာရီအကြား၌ Cagayan ကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လိမ့်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ဆက်လက်၍ Laoag City အား အောက်တိုလာ ၂၅ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်လည်းကောင်း၊ လာမည့် တနင်္လာနေ့ နံနက်စောပိုင်းတွင် Ilocos Norte ကိုကျော်ဖြတ်ကာ တောင်တရုတ် ပင်လယ်တွင်း သို့ ဖြေးညှင်းစွာဝင်ရောက်သွားမည်ဟု လည်းကောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT သည် အနောက်ဘက်သို့ပိုမိုနီးကပ်စွာရွေ့လျားမည်ဆိုပါက Balintang ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ကျော်ပြီး Cagayan နှင့် Ilocos Norte တို့အားတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခြင်းမှ သက်သာရာရစေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်၍ တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းနှင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတို့သို့ ဆက်လက်ဝင်ရောက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအတွက် မိုးကြီးနိုင်သည့် သတိပေးချက်များရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး တစ်ရက်အတွင်း ၇၅ မှ – ၂ဝဝ မီလီမီတာ (၃ လက်မ မှ ၈ လက်မခန့်) ရွာသွန်းနိုင်ပြီး ရံဖန်ရံခါ မိုးကြီးသည့်အခါ ၄ဝဝ မီလီမီတာ(၁၆ လက်မ ခန့်) အထိ ရွာသွန်းနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် ရေကြီး/ရေလွှမ်းမှု အန္တရာယ်ရှိကြောင်း သတိပေးထားပါသည်။
နောက်ဆုံးရရှိသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို T2K တွင် အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြထားပါသည် –
Time/Date: 12:00 PM PST Wed October 21 2009
Location of Eye: 19.8 N Lat 126.6 E Lon
Distance 1: 485 km (262 nm) ESE of Basco, Batanes
Distance 2: 540 km (290 nm) ENE of Aparri, Cagayan
Distance 3: 570 km (307 nm) ENE of Tuguegarao City
Distance 4: 585 km (315 nm) NE of Ilagan City
Distance 5: 620 km (335 nm) NE of Casiguran, Aurora
Distance 6: 655 km (355 nm) ENE of Laoag City
Distance 7: 780 km (420 nm) NNE of Naga City
Distance 8: 820 km (443 nm) NE of Metro Manila
MaxWinds (1-min avg): 150 kph (80 kts) near the Eye
Rainbands’ Rain Rate:2to 30 mm/hr (.02 to 1.2 in/hr) new!
Recent Movement: WSW @ 15 kph (08 kts)
Projected Area of Impact: Cagayan-Ilocos Norte
JTWC Ship Avoidance TrackMap: 8 AM Wed Oct 21
Multi-Agency Forecast TrackMap: 8 AM Wed Oct 21
လာမည့် ၅ ရက်အတွက် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT အင်အားနှင့် ရွေ့လျားမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို WUND မှ အောက်ပါအတိုင်းပုံဖေါ်တင်ပြထားပါသည်။
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: LUPIT, tropical-storm, typhoon, weather. LeaveaComment »
« တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT လမ်းကြောင်းမြောက်ဘက်သို့ အနည်းငယ်ရွေ့
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း LUPIT ယနေ့ည CAT-2 ပြန်ဖြစ်လာမည် »